ကျွန်တော်နှင့် မပြောချင်ဘူး ecency - Neoxian City
ကျွန်တော်နှင့် မပြောချင်ဘူး ecency
ကဲမပြောချင်ဘူး။ အာ့ဆို မပြောနဲ့လေ။ ဟုတ်ဖူးလေ ပြောချင်လို့ စကားစတာကို။ ကဲ- အာ့ဆိုလဲပြောဗျာ။ ကျွန်တော်ပြောရင် ပေရှည်တယ်ဗျ။
ကိုယ့်ဟာကို တစ်ယောက်တည်း အတိုင်အဖောက်ညီနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်ကဲ့ ကျနော်မပြောချင်တာက နိုင်ငံရေးအကြောင်း။ ဒါပေသိ အလွန့်အလွန်ပြောချင်နေတာက အဲ့ အီးရှန်စီ သို့မဟုတ် အိဆန်ဆီ ထားပါတော့လေ မြန်မာစာနဲ့ရေးရတာ တရုတ်သံထွက်နေတာ သူ့ဆိုက်တစ်ခုသာတွေ့သည်။ နောက်ထပ် ဆန်ဆီဆား ဆိုပီး ဘလော့ဆိုက်များ ထွက်လာဦးမည်ဆိုလျင် ကျွန်တော်တို့ အခက်တွေ့ဦးမည်။
တနေ့ဆီက သူ့ထံ ဘုတ်တောင်းသည်။ သူကလဲ ခပ်ချေချေ သူ့ပွိုင့်နှင့် သူ့ထံ ဘုတ်တောင်းရသည်မှာ ဟိုဟာ့ထံက ဟိုဟာကို ဟိုဟာကမျှော်ရသလိုပေါ့။ ကဲ သူ့အကြောင်းရေးရတာ ကိုယ့်ဟာကိုလည်ထွက်နေသည် ဟိုဟာတွေဒီဟာတွေနဲ့ စကားများရှုတ်ကုန်ပီ။ ထားပါတော့လေ မြန်မာစကားဆိုတာ အရှုတ်ကြီးလေ။ ကိုယ်က အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးရေးသော်လည်း အခြားသူက တစ်မျိုးတွေးထင်တတ်သည့် ဘာသာစကားမျိုးဖြစ်နေတော့ ခက်သည်ပေါ့ဗျာ။
အဲဟဲဟဲ ခုမှ အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ မြန်မာစကား၊ မြန်မာစာ ခက်ပုံလေး အကြောင်းအရာလေးတစ်ခု သွားပီးအမှတ်ရသဗျာ။ ဒီလိုဗျ အင်းလေ မမေးလဲ ပြောချင်နေတော့ ဇွတ်ပြောပြရတော့မှာပဲဗျာ။
ဒီလိုဒီလို- ဟိုးအရင်တုန်းက ဘကြီးဘုန်းကြီးတို့ခေတ်ပေါ့ဗျာ အဂ်လိပ်ကြီးတစ်ယောက်က မြန်မာစာ မြန်မာစကားသင်လိုပါတယ်လို့ ဘုန်းကြီးကို လျောက်ခိုင်းသတဲ့။ အဲ့ခေတ်က စာသင်ပေးတာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုး။ အဂ်လိပ် ကိုလိုနီခေတ်ထင်ပါရဲ့။ ဒါနဲ့ အဂ်လိပ်ကြီးကို စာသင်ပေးဖို့ ရွာသူကြီးက ဘုန်းကြီးထံလျောက်ပေးရသတဲ့။
ဘုန်းကြီးကလဲ ဒီလောက်တောင် စာသင်ချင်တဲ့ အဂ်လိပ် ပညာပြလိုက်အုန်းမယ်ဆိုပီး လက်ခံလိုက်သတဲ့။ ပထမနေ့မှာ ဘုန်းကြီးက စာကိုဒါရိုက်သင်ပေးတာမဟုတ်ဘူး စာရွက်တစ်ရွက်နဲ့ လိုက်မှတ်ခိုင်းတယ် ဘယ်နေရာမှာ လဲဆိုတော့ ရွာ့ပြင်က ကုက္ကိုပင်ကြီးအောက်မှာစောင့်ပီး လာသမျှလူတွေကို မေးပီး သူတို့အဖြေကို စာရွက်နဲ့မှတ်ခိုင်းတာပေါ့။
ဒါနဲ့ အဂ်လိပ်ကြီးက သူ့ကိုဘာသာပြန်ပေးမယ့် သူကြီးကိုခေါ်သွားပီး ရွာပြင်ထိပ်က ကုက္ကိုပင်ကြီးရဲ့ သစ်မြစ်ဆုံပေါ်ထိုင်ပီး လာသမျှလူတွေကို မေးတော့တာပေါ့။
ဟေ့လူ ရပ်စမ်း ကွတတနဲ့ ဘာဖြစ်လာတာလဲ မေးတာဖြေစမ်း။
ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော် နောက်ဖေးသွားချင်နေလို့ မအောင့်နိုင်တော့ဘူး သွားပီဗျာ။ အဲမှာ စတွေ့တာပဲ သူကြီးကို အဲလူက ဘာပြောတာလဲလို့ ဘာသာပြန်ခိုင်းတာပေါ့။ နောက်ဖေးသွားတယ်ဆိုတာ ဗိုက်နာလို့ ဝိတ်သွားလျော့တာပေါ့လို့ ပြန်ဖြေသတဲ့။
ဟုတ်ပီ ဟောနောက်တစ်ယောက်လာစမ်း မင်းဘယ်သွားမလို့လဲ မေးရော။
ကျနော် အပေါ့စွန့်ချင်လို့ နောက်ဖေးသွားမလို့ဗျာ။
ဟင်လာပြန်ပီ နောက်ဖေး၊ အပေါ့စွန့် ဘာလဲသူကြီး။
အဲဒါက ဟိုလေ သူက ရှူးရှူးပေါက်ချင်တာ အဲဒါ နောက်ဖေး သွားရတာပေါ့ဗျာ။ ဟင်ခုနကလဲ နောက်ဖေး ဗိုက်နာလို့သွား။ အခုလဲ နောက်ဖေး ရှူးပေါက်ချင်လို့ ။ ကဲဘာပဲပြောပြောမှတ်သကွာ။
အင်း ကဲလာလေ့မှတ်လိုက်ပီ နောက်ဖေးသွား= အပေါ့စွန့်ရန်။
ကဲနောက်တစ်ယောက်လာပြန်ပီ၊ ဟဲ့မယ်မင်း ဘယ်သွားမလို့လဲ။
ဟိုလေဟိုလေ ကျမ ကျင်ကြီးစွန့်ချင်လို့ နောက်ဖေးသွားချင်လို့ပါရှင်။
ဟင်လာပြန်ပဟ နောက်ဖေး ကို ကျင်ကြီးစွန့် ဘာလဲဟ သူကြီးပြောအုန်း။
ဒီလိုဘာ အဲ့ကလေးမက ဗိုက်နာလို့ အီးအီးပါချင်လို့ နောက်ဖေးသွားမယ်ပြောတာ။ ဟင်လုပ်ပြန်ပဟ နောက်ဖေး ကျင်ကြီးစွန့်။
ကိုင်းကိုင်းနောက်တစ်ယောက်လာပြန်ပီ ဟေ့ မင်းဘယ်သွားမှာလဲ။
ဟာ ပလိပ်မင်းကြီး ကျွန်တော် ဗိုက်နာလို့ နောက်ဖေးကို တောထိုင်သွားမလို့ဗျာ။ ဟာ လာပြန်ပဟ နောက်ဖေး တောထိုင်၊ ဘာပြောတာတုန်း သူကြီးရ ရှင်းပါအုန်း။ အဲကောင်ကလေးက ဗိုက်နာလို့ နောက်ဖေးသွားပီး တောထိုင်တာကိုပြောတာဗျ။
ကဲလေ အဲဒီတော့ မှတ်လိုက်မယ် နောက်ဖေးသွား= တောထိုင်။
ဒီလိုနဲ့ ပြောရရင် အဂ်လိပ်ကြီး မှတ်သားထားလိုက်တာက
နောက်ဖေးသွား=ရှူးပေါက်ချင်လို့ -- လို့ -- လို့ ။ နောက်ထပ် (လို့)ပေါင်းများစွာပေါ့ဗျာ။
အဲမှာတင် အဂ်လိပ်ကြီး သူ့တိုင်းပြည်ပြန်သွားတယ်ဆိုပဲဗျာ။ မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားကို ဒီတသက်သူမသင်နိုင်တော့ကြောင်း စာသားလေးတစ်ခုတည်းက အဓိပ္ပါယ်ပေါင်းများစွာကို ကိုယ်စားပြုနေတာ သူလိုက်မမှီတော့ကြောင်းဆလံပေးသွားရောဗျာ။
အင်းဗျာ အဓိကပြောချင်တာက အီးရှန်စီ ခပ်ချေချေနေလို့ ဘုတ်မပေးနိုင်တာကိုပြောချင်တာကနေ သူ့အကြောင်းစာလုံးပေါင်းတာကတစ်ဆင့် အဂ်လိပ်ကြီး စာမသင်နိုင်တာဆက်ပြောဖြစ်သွားတာ။ အဲဒါကြောင့် ကျွန်တော်မပြောချင်ပါဘူး အစကတည်းက ပြောနေခဲ့တာလေဗျာ။ ကျွန်တော်ပြောရင် ပေရှည်ပါတယ်လို့ဆို။
အခုမှ အကြောင်းစုံသိရတာက အီးရှန်စီက သူ့ဆိုက်ကို ပြုပြင်ရေးလုပ်ပုံရပါတယ် wallet မှာ ဒီဇိုင်းတစ်မျိုးတိုးလာတယ်လေ။ ကိုဟင်ပြောပုံအရ နောက်ပိုင်းမှာ hive-engine ကိုပါ ဒါရိုက်ချိတ်ဆက်နိုင်မည်လို့ပေါ့။ ဒီလိုတွေသိလိုက်ရတော့ ကိုယ့်ပိုစ်လေးကို လာဘုတ်မပေးနိုင်တာ နဲနဲခွင့်လွတ်လိုက်မိသည်။
ဒါပေသိ အခုပိုစ်ကိုလည်း ကိုအီးရှန်စီထံမှ ဘုတ်တောင်းရန် တေးမှတ်ထားသည်။ လာမဘုတ်လျင်တော့ ကျွန်တော်မပြောချင်ပါ။ သိတယ်မို့လား ကျွန်တော်ပြောလျှင် ပေရှည်သွားမည်။
hive-122133 blog proofofbrain trafficinsider hive-list palnet neoxian archon writing literature
ကဲလေ ငါလဲမပြောချင်ဘူးနော် :D !LOLZ !PIZZA
@nyimwa you can call @lolzbotamaximum of6per day.
@uthantzin(3/10) tipped @nyimwa (x1)
ကျုပ်တို့လည်း အီရှန်စီက လာမဗုတိပါဘူးလေ။
What to you call it when you think about eating cheese?
မဘုတ်ဆို သူလဲ အလုပ်ရှပ်နေသကိုး !LOLZ
အတူတူပါပဲ ... ၃ ရက်တခါ လာ ဗုတ်တယ်။ !LOL !PIZZA. !LUV
အခါတိုင်းဆို နေ့တိုင်းဘုတ်ပါတယ် ဒီရက်ပိုင်းမှ သူမအားတာနေမှာ !LOLZ
ဟုတ်တယ် လာလိုက် မလာလိုက်ပါပဲလေ....!PIZZA
သူက ခပ်ချေချေရယ် မျော်ရတဲ့သူမောတာ !LOLZ
@uthantzin, I sent you an $LOLZ on behalf of @nyimwa